Doomaha dheecaanka dareeraha ah ee Jeff Penner ee ka dhanka ah nabaad-guurka ciidda Nidaamka Majaladda Baradhada
Doomaha shubanka ee Jeff Penner ee ka soo horjeeda nabaad guurka
в Agrotechnology, Diirada, Isbeddellada / Isbeddellada, Injineerinka / Teknolojiyada
Beeralayda Jeff Penner waxa u arka inay niyad jab ku tahay inuu arko xaddi badan oo biyo ah oo walaaqaya oo ku sii qulqulaya bohol biyo-mareen qoto dheer. Beeralayda qaarkood waxay jecel yihiin muuqaalka iyo codka, laakiin ma jecla Penner. Waxa kaliya ee uu arko ama maqlo waa carro nabaad guur- tan iyo tan, inch by inch, barxad kubiyeed by dayrka cubic ee ciidda sare oo laga soo saarayo beeraha oo la dhigay mayl fog. Si loo helo beeralayda xal macquul ah dhibaatada joogtada ah ee nabaadguurka biyaha, Penner waxay samaysay godad biyo-mareen ah kaas oo biyo-mareenku uu qalalan yahay. Ma jiri doono daadad ku qulqulaya godka degmada ama beeraha deriska ah.
"Waxaan samaynaynaa bohol ballaadhan, qarsoon, god gacmeed oo dabayshu ku wareegsan tahay garoonka, isagoo si caajis ah uga soo gurguuranaya godad ilaa godad, si tartiib tartiib ah ugu soo degaya cidhifka," ayuu yiri Penner. "Markay biyuhu ka gudbaan meel qallalan, way qooyaan. Biyaha haddii kale keeni kara dhibaatooyin xagga hoose ayaa hadha. Waxay u dhowdahay sida barxad si loo yareeyo qulqulka biyaha."
Si kastaba ha ahaatee, u beddelashada aragtidan xagjirka ah ee dhabta ah marka hore waxay u baahneyd waqti wax soo saar oo muhiim ah aqoon-is-weydaarsigiisa, sababtoo ah wuxuu u baahday fikrado cusub oo loogu talagalay xoqista-qaar ka mid ah qalabka wax lagu duubo iyo dhululubada haydarooliga oo awood u leh inay qabtaan hawlo dhaq-dhaqaaqa ciidda adag. Nooca mashiinka dheecaanka V-Wing ee 32-foot ah waxaa tijaabiyay halabuuraha goobta.
Tiknoolajiyada Xakamaynta Tooska ah (ASC) waxay si gaar ah muhiim ugu tahay samaynta fikradda socodka qunyar socodka ah ee uu leeyahay run. Intii lagu xidhi lahaa god toosan, ASC waxay ku haysaa daabyada qoto dheer ee saxda ah ee goynta sida zigzagyada hawlwadeenka ka soo godadka ilaa godka u socda halka ay u dambeeyaan, kaas oo ah cidhifka garoonka. Tani waxay abuurtaa jiirar labis ah oo ku dhereran dhererka godka oo dhan, markaa niyad-jabka. ASC waxay isticmaashaa dareemayaal leexleexan kuwaaso u soo dira fariimaha kormeeraha u soo dira farriimaha valves-ka hawo-mareenka ee maamula daabyada.
"Dadka qaarkood waxay u maleynayaan inaan samayno biyo-xireenno dhoobo ah cidhifyada kuwaas oo hoos u dhigaya socodka biyaha, laakiin tani run maaha. Baalasheena waxay u badan yihiin sida garbaha fasalka. Si biyo ah ayaa loo xakameeyaa si ay uga shaqeeyaan dhammaan jihooyinka iyo xaglaha. Waxaad u dhaqaaqi kartaa bidix, dhan midig, V jeex, ama wax kasta oo isku dhafan oo u dhexeeya. Markaa waxaad sii wadaa kala soocida ciidda iyo godka, adigoo simay si aad cidhifku u sii wadato."
Penner wuxuu qirayaa in V-Wing ay adagtahay in la shaqeeyo. Waxa ay qabataa jeexid, dabayl-wareejin, kala-soocid, dhiiqo qaadid iyo xoqid. Waxay dejinaysaa kontaroolada baalasha si uu hawlwadeenku u dejiyo jaanis hal ama laba derajo ah oo koontarooluhu wuxuu si toos ah u ilaalin doonaa jiiradaas dhinacyada godka. Jiidadka dabacsani ma waxyeeleeyaan abuurka, buufinta ama qalabka goynta. Xaaladaha ciidda intooda badan, V-Wing 3200 HD waxay jari kartaa afar inji oo qoto dheer shan mayl saacaddii. oo ay jiiday cagaf qaadi karta 450 hooras. Ka yar 2100 HD wuxuu u baahan yahay 300 hp. si loo sameeyo gooyn afar-inch ah xawaarahaas. Tijaabada goobta, 2100HD waxa ay gooyn kartaa oo dhamayn kartaa meel nus-mayl-dherer ah, 40 cagood-ballac ah bohol- hoose 30 daqiiqo gudaheed. Ka dib markii la abuuro qulqulka weyn oo riixaya ciidda kor u kaca cidhifyada, V-Wing ayaa soo noqda si uu u sameeyo mid ka mid ah gees kasta, isagoo ku duubaya ciidda oo ka soo jiidaya godka.
Tags: marinnada dheecaankanabaad guurka ciidda
Corteva Agriscience iyo MGIMO waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi
Rajada laga qabo horumarinta baradhada iyo dhirta ayaa lagu falanqeeyay miis wareeg ah